BRUSSELS GRIFFON DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Brussels Griffon Dog Macluumaadka iyo Sawirada
'Tani waa Zao aka' Man. ' Waa 10-lb., 11-bilood jir ah Brussels Griffon. Wuxuu leeyahay shaarubaha ugufiican ee waligaa aad aragtay. Wuxuu jecel yahay qof walba! Saaxiibkiisa ugu fiican ayaa ah Shelby Shiinaha Crestless Crested . '
Liistada eeyaha Griffon ee isku dhafan ee loo yaqaan Brussels Griffon
Griffon waa eey adag oo toy ah oo badanaa loo maleeyo inuu u eg yahay Ewok filimkii Star Wars. Madaxa weyni waa wareegsan yahay wejiga dudumiska iyo joogsi qoto dheer. Afka ayaa aad u gaaban, una muuqda in gadaal loo riixay. Sanka madow waa mid aad u gaaban. Eeygu wuxuu leeyahay xad-dhaaf xad dhaaf ah oo carrabkiisu sudhan yahay. Indhaha madow waa kuwo ballaaran oo caan ah oo leh baarkooda madow, oo dheer. Dheguhu way sarreeyaan, ha gooyeen ama dabiiciyan ayaa looga tegey. Dhegaha Dabiiciga ah waxaa loo qaadaa nus-kacsan markii la jaro dhegaha oo istaagaya iyagoo u socda meel. Lugaha lafta toosan waa dherer dhexdhexaad ah. Dabada ayaa sare loo dhigay oo waxaa lagu xiray ilaa 1/3 oo dherer ah. Fiiro gaar ah: dhegaha oo la jaraan ama dabo lagu xidho ayaa sharci darro ka ah inta badan Yurub. Waxaa jira laba nooc oo jubbado ah, oo qalafsan oo siman. Koodhka adagi waa mid cufan oo dahaadh ah. Koodhka jilicsan, oo sidoo kale loo yaqaan 'Petit Brabancon kala duwan', dhogorta ayaa gaaban, cidhiidhi ah, dhalaalaya oo toosan. Koodhadhka gaagaaban ayaa si fudud loo hagaajin karaa Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah casaan (bunni casaan leh oo waxyar oo madow ah sanka muusikada iyo garka), belge (isku dar ah casaan-bunni iyo madow inta badan leh maaskaro madow iyo afuuf), madow iyo midab (madow leh calaamado bunni guduudan oo garka hoostiisa ah, lugaha , isha kor ku xusan, cidhifyada dhagaha iyo hareeraha hawo), iyo madow adag.
Griffon waa eey faraxsan oo caqli badan oo leh dabeecad u eg dabiicad. Shakhsiyaad badan, waxay samaysaa eey wehel fiican ah waxayna ku fiican tahay eeyaha iyo bisadaha kale. Kalgacayl, soo jiidasho, nolol iyo xiiso badan, way jecel yihiin qof walba. Griffon kuma noolaan karo banaanka qolka. Haddii aad quujiso qashinka miiska, waxay noqon karaan kuwo hunguri weyn ama kuwa wax cuna. Way adkaan kartaa in guriga la jajabiyo. Waxay sameeyaan ilaalin wanaagsan waxaana lagu bari karaa inay sameeyaan tabo. Sababtoo ah eeygan muuqaalkiisa muuqaalka aadanaha ah, kaliya laguma naaneyso 'wajiga daanyeer,' laakiin waxay u nugul yihiin in loola dhaqmo sidii iyagoo aan eey ahayn, laakiin aadane yar . Tani waxay keentaa wax la yiraahdo Cudurka Dog yar . Eeygu wuxuu bilaabaa inuu aamino inay tahay xukunka guriga, IT-na waxay u sheegtaa Bini'aadamkeeda waxa ay sameyn karaan iyo wixii aysan sameyn karin. Marka bani'aadamku u oggolaado eey inuu la wareego guriga, wuxuu sababa heerar kala duwan dhibaatooyinka dhaqanka , oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, kas u ahaansho, dalbasho, qaylo xanaaq badan, ilaalin , kala-go'id walaac , qabsashada iyo xitaa qaniinyada. Waxay noqon karaan kuwo aan lagu aamini karin carruurta iyo mararka qaarkood xitaa dadka waaweyn. Iyadoo aan ku filneyn jimicsi maskaxeed iyo mid jireed , waxay noqon doonaan kuwo heer sare ah, dabacsan oo xasaasi ah. Kuwani maahan sifooyinka Griffon, laakiin dabeecadaha waxaa keenay la'aanta shirkad, kalsooni, iswaafaq la'aan hogaamiyaha xirmada , Hay'ada Caafimaadka Aduunka waxay bixisaa xeerar waa inay raacaan oo xadidaan waxa ay yihiin oo aan loo oggolayn inay la socdaan waxaas qadarka saxda ah iyo nooca jimicsiga .
Dhererka: 7 - 8 inji (18 - 20 cm)
Miisaanka: 6 - 12 rodol (2.5 - 5.5 kg)
U nuglaanta xiiq, isha iyo dhibaatooyinka neefsashada. Xasaasi u ah kuleylka. Maaha biyo-xireennada ugu fudud ee biyo-xireenku badanaa u baahan yihiin qalliin qalliin.
Griffons waa eeyo u fiican nolosha guriga oo waxay sameyn doonaan okay la'aan deyr.
Eeyadan yar yar ayaa gudaha aad ugu firfircoon, si kastaba ha noqotee, sida eeyaha oo dhan, wali waxay u baahan yihiin in loo qaado a socod maalinle ah si ay u gutaan dareenkooda aasaasiga ah ee socodka.
1 - 3 eeyo yaryar, isku celcelis 2
buluug sanka buluugga qasan
Koodhka jajaban wuxuu u baahan yahay fiiro gaar ah, si kastaba ha noqotee jaakada eeyaha xayawaanka ah waa la jari karaa. Griffon wax yar ayuu ku daadiyaa timo la'aan.
Waxaa jira saddex nooc oo Griffon ah, Brussels Griffon, Belgian Griffon iyo Petit Griffon. Ninka reer Belguim ee Griffon wuxuu leeyahay jaakad dhaadheer oo dhaadheer oo wejiga dhinacna ka mariyey. Brussels Griffon waxay leedahay jaakad ka sameysan dharka oo ka dheer tan reer Belgium Griffon. Petit Brabancon wuxuu leeyahay jaakad gaaban oo siman. Brussels Griffon waxaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay Bandhigga Brussels ee 1880. Tusaalaha hore ee nooca ayaa lagu sawiray Van Eyck, oo ah rinjieyaha Flemish. Markii ay hayeen wadayaasha taksiga ee qarnigii 17aad ee Brussels si ay uga takhalusaan guryahooda xayawaanka, Brussels Griffon wuxuu noqday wehel wehel ah iyada oo loo eegayo dabeecaddiisa rafcaanka ah. Daboolka jilicsan ee loo yaqaan 'Petit Brabancon' waxay u badan tahay inuu ka gudbay Baabuur dhiig. Noocyo kale oo ay ka mid yihiin Affenpinscher , Ingiriisi Ciyaaryahan Isbaanish ah , Eyga waddada Beljamka, Yorkshire Terrier iyo Terrier-ka Ireland waxaa laga yaabaa inuu wax ku darsaday Griffons-ka casriga ah. AKC waxay aqoonsan tahay kaliya noocyada kala duwan ee loo yaqaan Brussels Griffon. Heerkeeda Mareykanku wuxuu u oggolaanayaa dhammaan noocyada midabka, madow illaa casaanka, iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee jilicsan (Brabancon). FCI, si ka duwan, waxay u kala qaybiyeen saddex nooc: siman (Petit Brabancon), casaan daran (Brussels Griffon) iyo midabbo kale oo u eg (Belgian Griffon). Sidaa darteed, Yurub gudaheeda waxaa lagu muujiyaa si gooni gooni ah iyada oo aan la dhexgelin noocyada. Ameerika, in kasta oo isku halbeegyadu jiraan, haddana waxaa lagu daraa hal nooc oo leh midabbo kala duwan iyo noocyo jaakad ah. Waxay ahayd Brussels Griffon oo ka soo muuqatay filimka 'Sidii ay u fiicnayd.' Xoogaa dhif ah, Griffons way adkaan kartaa in la helo.
Beljimka Griffon APRI, CKC, FCI, NKC
Mia the Brussels Griffon oo ah eey markay 13 usbuuc jirsadaan sariirta
Kani waa Taz, oo ah Griffon Bruxellois. Waa seddex jir madow iyo midab 'qallafsan'. Lahaanshaha sawirka Sherway Griffons-eeyga yar oo leh dabeecad weyn!
Bella waa Petit Brabancon.
Tani waa lix billood jir Brussels Griffon oo lagu magacaabo Ygor van de stad van Haven Belgium Breed. Waxaa iska leh C. Aerts-Depre
Ouzie ninka Petit Brabancon
Eeg tusaalooyin dheeri ah ee Griffon-ka Belgian
Sawirada Belgian Griffon 1
Biljimka Griffon Sawirada 2
Biljimka Griffon Sawirada 3
dhalooyinka yaryar ee quudinta dhalada ah 3 toddobaad
buluug merle sawiro dane weyn
eey eyda noocoodu yahay Terland galbeed
boston terrier isku dhafan bulldog
iskudhaf faransiis bulldog basset hound mix